Ogaden News Agency (ONA) – Saddeq Kun oo Arday Oromo ah oo Lagu soo Ururiyay Xeryo Iyagoo Madaxyada Loo Xiiray
Saddeq Kun oo Arday Oromo ah oo Lagu soo Ururiyay Xeryo Iyagoo Madaxyada Loo Xiiray
Posted by ONA Admin	/ July 17, 2014
Arimaha layaabka lehee ee xukuumadda wayaanaha ku dhaqaaqeen waxaa ka mid ah inay ardaydii Oromada ay kasoo ururiyeen jaamacadda Adisababa iyo dugsiyada kale ka dibna isugu keeneen xeryo, halkaasoo ay timaha kaga xiireen.
Dhaqankan ayaa ahaa midkii uu Nazi-ga ay xeryaha ugu uudeen dadka gaar ahaan Yuhuudii Yurub oo halkaasi ay ku laayeen. (Halkan Riix)
Wararka ka imanaya Itobiya ayaa sheegay in magaalada Ambo iyo magaalooyin kale ay kasoo ururiyeen arday kor u dhaafaya soddon kun oo iyagana meela kala duwan xeryo looga ooday.
Xukuumadda Wayaanaha ayaa aad uga cabsi qaba inay qalalaaso ka xoog badan midkii doorashooyinkii 2005tii ka bilowdaan Adisababa iyo magaalaooyinka kaleba, iyadoo aad loo saadaalinayo in aanay Oromada ogaalan doonin in aqlibiyadda ay ku leeyihiin dalka loo adeegsado oo kali ah in lagu shaqaysto oo shucuubta kale lagu cabudhiyo. Waxaa aad usii badanaya dareenka qawmiyadda Oromada oo hadda mideeyay garabyadoodii mucaaradka ahaa, kuna talagalsan inay hantaan awood dalka.
Maamulka TPLF ee ku adeegta ururka talada dalkaa haya ee EPRDF ayaa kaga jawaabay dhaq-dhaqaaqa ay wadaan ardayda iyo dhalinyarada inay xeryahan kusoo ururiyaan, kadibna madaxyada u xiiraan si loo bahdalo dhalinayarada.